Imaaraadka oo ku faanay xoogaa Timir ah oo uu ka qaybiyay meelo ka mid ah Soomaaliya! Marin habaabin mise Mucaawino? | Hadalsame Media
Home Wararka Imaaraadka oo ku faanay xoogaa Timir ah oo uu ka qaybiyay meelo...
Imaaraadka oo ku faanay xoogaa Timir ah oo uu ka qaybiyay meelo ka mid ah Soomaaliya! Marin habaabin mise Mucaawino?
(Garowe) 18 Maarso 2019 – Dowladda Imaaraadka Carabta oo la aamisanyahay inay jilaafo iyo lugeeyo ku hayso dowladnimada Soomaaliya islamarkaana kala qaybinayso dhulka Soomaaliya ayaa ku faantay in xoogaa Timir ah ay gobolo Soomaaliya ka tirsan ka qaybisay.
Hay’ad magaceeda la yiraahoKhalifa bin Zayed Al Nahyan oo uu leeyahay amiirka Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in Lixdan Tan oo timir ah ay u qaybisay qoysas Soomaaliyeed.
Timir qeybintaan ayaa ka dhacday deegaanada Maamulka Soomaaliyeed ee Puntland waxaana dadka badan layaab ku noqotay Siyaasad xumida Imaaraadka oo doonaya inuu adeegsado waxyaabo uu dadka kaga marin habaabinayo faragalinta xasilooni darrida Siyaaseed ee Imaaraadku ku hayo Soomaaliya.
Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa lagu eedeeyay inay wado majo xaabin xoog leh oo ay ku doonayso inay daciifiso dowladnimada Soomaaliya si markaas ay dekaddaha Soomaaliya saameyn ugu yeelato.
Previous articleSAWIRRO: Kessié iyo Biglia oo lakala jiidey! (Maxay isku maageen?)
Next articleShacabka iyo Askarta keebaa qaldan markii waddooyinka Muqdisho ay xiran yihiin? Wax badan oo aadan horey u ogeyn!